VITEC မှ MGW Ace သည် Vegas တွင်အနိုင်ရ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » VITEC ရဲ့ MGW Ace ကို Vegas မှာ Big ဆွတ်ခူး
ပထမနှင့်သာလျှင်အိတ်ဆောင် HEVC ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ 2015 မှစ. နေအိမ်ပြရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အယ်ဒီတာ့ဆုပေးပွဲယူ NAB ပြရန်
SUNNYVALE, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဧပြီလ 29, 2015 - VITEC, ယနေ့ယင်း၏ MGW Ace ကိုခရီးဆောင် HEVC encoding ကနှင့် streaming များပစ္စည်းဟာ 2015 မှာသုံးဂုဏ်သိက္ခာဆုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းအဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းနှင့် streaming များဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ကြေငြာခဲ့သည် NAB ပြရန်။ အဆိုပါဆုနှစျယောကျ - သည် "InGEAR -Technical ကုန်ပစ္စည်းဆု" အမျိုးအစားနှင့် NAB 2015 ၏လွှမီဒီယာအကောင်းဆုံးအတွက် InBroadcast 2015 အယ်ဒီတာ့ဆုချီးမြှင့် - တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ဝေ၏အယ်ဒီတာများနှင့်စာရေးဆရာများအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ တတိယဆုများအတွက်တရားသူကြီးပြရန်၏ဗီဒီယို Edge အကောင်းဆုံး, အယ်ဒီတာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး panel ကပါဝင်သည်။ အားလုံးသုံးဆုသည့် 2015 မှာသစ်ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထွက်ကြောင်းဆိုလို NAB ပြရန်, MGW Ace ကိုအများဆုံးထင်ရှားတဲ့ထုတ်ကုန်အကြားခဲ့ပါတယ်။
, On-တည်နေရာသတင်းအသံလွှင့်ဘို့စံအောင်၏ Point-to-point အလှူငွေ - အချိန်မရွေး, နေရာမရွေး - "ကျနော်တို့ကအထူးသယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ Real-time ဗီဒီယိုအတွက်ဒီနေ့ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်ဖို့ MGW Ace ကိုအင်ဂျင်နီယာ HD ဗီဒီယို, အားကစားကွင်းကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း, မစ်ရှင်-အရေးပါသောစစ်ရေးပုံရိပ်ဖြန့်ဖြူး, "Philippe Wetzel ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် VITEC။ "ကျနော်တို့တရားသူကြီးဒီပထမ-of ယင်း၏-ကြင်နာထုတ်ကုန်ဘို့ငါတို့ရူပါရုံကိုမြင်သောဝမ်းသာပါတယ်။ သုံးလေးစားဖွယ်စာပမြေားအားဖြင့်တစ်ဦး standout အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အမှန်တကယ်ဂုဏ်အသရေဖြစ်၏။ "
စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံးလုံးဝခရီးဆောင် HEVC ဟာ့ဒ်ဝဲအန်ကုဒ်အတိုင်း, MGW Ace ကိုတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းသို့ high-အရည်အသွေး, အနိမ့်နှောင့်နှေးဟာ့ဒ်ဝဲ codec ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် server ကိုအခန်းပေါင်းထဲက ထွက်. လယ်သို့ HEVC encoding ကကြာပါတယ်။ တပ်ဆင်ထား VITEC'' s ကို Real-time H.265 ဟာ့ဒ်ဝဲ-based ချုံ့ chip ကို; သွင်းအားစု၏ကျယ်ပြန့; ထောက်လှမ်းရေး, စောင့်ကြည့်ခြင်း, ကင်းထောက် application များအတွက် KLV / STANAG metadata ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့; နှင့်အမွေဒီကုဒ်ဒါကိုထောကျပံ့ဖို့အလယ်တန်း MPEG-4 H.264 chip ကို, အ MGW Ace ကို High-ထိရောက်မှုထုတ်လွှင့်အရည်အသွေး4များအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်: 2:2နှင့် 4: 2:0HD streaming များ။
MGW Ace ကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့် VITEC'' s ကိုထုတ်ကုန်များအပြည့်အဝ line ကို www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။vitec.com နှင့် www.mgwace.com.
VITEC ထုတ်လွှင့်, စစ်ရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ပညာရေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, Telco, အစိုးရ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အားကစား, ဖျော်ဖြေရေးဖောက်သည်များအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့မီဒီယာဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့သောဆန်းသစ်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုထုတ်ကုန်များ၏တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ VITECပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ဗွီဒီယိုနည်းပညာများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အဓိကဒေါင်လိုက်စျေးကွက်များ၌အဓိကဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမောင်းနှင်ခြင်း၏ရှုခင်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www www ။vitec.com ။
ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအားလုံးကုမ္ပဏီနှင့်ထုတ်ကုန်အမည်များအမှတ်တံဆိပ်နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ © 2015 VITEC
2015 NAB ပြရန် 2015 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2015 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း MGW Ace ကို NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vitec 2015-04-29
ယခင်: အဆိုပါနာမည်ပျက်စာရင်းက Short Anton / Bauer က Litepanels နှင့် OConnor Lists
နောက်တစ်ခု: Broadpeak အတူ Comigo အပေါင်းအဖေါ်များ Multiscreen ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများအဘို့, အတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းတီဗီ Enhance မှ